यो हो १ केजी कै नेपाली ४ लाख ३० हजार रुपैयाँ पर्ने आँप, घर या गमलामा नै आजै रोप्नुहोस् - Nepali in Australia
June 22, 2021 autherLeaveaComment on यो हो १ केजी कै नेपाली ४ लाख ३० हजार रुपैयाँ पर्ने आँप, घर या गमलामा नै आजै रोप्नुहोस्
काठमाडौं । एउटा आँपको मुल्य कतिसम्म पर्छ ? धेरै भए १०० देखि ५०० सम्म पर्छ होला ।तर भारत मध्य प्रदेशको जबलपुर शहरबाट करीव ५० किलोमिटर टाढा चारगावान क्षेत्रमा रहेको आँप फार्म हाउसमा पाकेको आँप निकै चर्चामा आएको ।
फार्म हाउसका मालिक संकल्प परिहारका अनुसार प्रति किलोग्राम ४ लाख ३० हजारसम्म पर्न सक्छ । विशेष गरेर जापानमा पाइने यो महँगो प्रजातिको आँपलाई टाईयो नो तामागो भनेर चिनिन्छ ।यो मूल रूपमा जापानमा मात्र पाइन्छ । उता, जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुरका बागवानी वैज्ञानिक प्रो. एसके पाण्डेले फार्ममा भएको आँपको मूल्य सम्बन्धिको दावीलाई खारेज गरेका छन् ।
उनका अनुसार यसमा सत्यता छैन । डिएनए परीक्षण गरेपछि मात्र मुल्य प्रमाणित गर्न सकिन्छ । मुल्यको बहस परीक्षणपछि गर्दै गरौंला तर यो चर्चामा आउँनुको कारण भने अझ रोचक रहेको छ ।
आँप संरक्षण गर्ने प्रणाली नै अहिले चर्चाको विषयवस्तु बनेको हो । संकल्पले यस आँपको रूखहरूको रक्षा गर्न तीन गार्डहरू नियुक्त गरेका छन् । गार्डहरुसँग साथमा नौ कुकुरहरू पनि त्यस आँपको सुरक्षामा लागेका छन् ।संकल्पले चेन्नईको एक नर्सरीबाट तीन बर्ष पहिले विभिन्न प्रजातिहरुका करिब १०० आँपका बिरुवा ल्याएका रहेछन् ।
तीमध्ये ५२ बोटहरू ताईओ नो तामागो प्रकारका थिए । पछिल्लो वर्ष जापानी विधिको आँप आउन थालेका छन् । गुगलबाट आँपको प्रजाति फेला पारिसकेपछि, उनले यसको मूल्य थाहा पाए अनी कडा सुरक्षाको प्रबन्धहरू मिलाए ।
त्यहाँ अन्य देशबाट बोट ल्याउने बृहत् प्रक्रिया
कृषि मन्त्रालय, भारत सरकारका अतिरिक्त आयुक्त, बागवानी विभागका डा। नवीन पटेलले यदि बोटबिरुवा वा बागवानी सम्बन्धी सामग्रीहरू अन्य देशहरूबाट ल्याउनुपर्‍यो भने, त्यहाँ एक पूर्ण प्रक्रिया भएको कुरा जानकारी गराए । त्यहाँ एक परीक्षण समिति पनि रहेको छ ।आवेदन पछि समितिले निर्णय गर्छ कि अर्को देशबाट भारत ल्याईरहेको बिरूवा भारतका लागि उपयुक्त छ वा छैन ।
यो प्रक्रिया अनुसरण नगरीकन अन्य देशहरूबाट बिरूवा, बीउहरू ल्याउन बन्देज गरिएको छ । उनका अनुसार भारतमा अन्य देशहरुमा मात्रै पाइने प्रजातिका बोटबिरुवाहरु ल्याउन धेरै कठिन छ ।
कृषि वैज्ञानिकहरूको असहमति
संसारको सबैभन्दा महँगो आँप आफुसँग भएको दावा गर्ने संकल्पको कुरामा कृषि वैज्ञानिकहरूको फरक मत छ । प्रा. एसके पाण्डेले भारतमा १२०० किसिमका आँप पाउने उल्लेख गर्दै भने, ‘यो भन्न सकिदैन कि यो ताइयो तामागो प्रजाति हो, जबसम्म डीएनए मिल्दैन ।खेतका मालिकलाई यसको विविधताका बारे थाहा छैन् । न त उनले आधिकारीक नर्सरीबाट बिरुवा लिएका छन् । चेन्नईमा धेरै नर्सरी सञ्चालकहरूले धेरै प्रजातिहरू मिलाएर नयाँ प्रजातिहरू तयार गर्दछन्, जुन मूल प्रजाति हो कि होईन भनेर पत्ता लगाउन सम्भव छैन ।’
ताईयो नो तामागो के हो ?
यो विशेष प्रकारको आँप जापानको मियाजाकी शहरमा उत्पादन गरिन्छ । हेर्दा यो रातो रंगको हुन्छ । यसलाई संसारमा सब भन्दा महँगो मानिन्छ । बताइए अनुसार यस आँपमा रङ्ग, तौल र चिनीको स्तर निश्चित हुन्छ ।
एउटा आँप कम्तिमा ३५० ग्राम हुन्छ । यसमा चिनीको मात्रा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुनुपर्दछ ।यस आँपको लागि तापमान र सूर्यको प्रकाशको लागि विशेष प्रबन्धहरू गर्नुपर्छ । ताइयो नो तामागोको अर्थ जापानमा ‘सूर्यको अण्डा’ भन्ने हुन्छ ।
यो नेपालको हावापानीमापनि मज्जाले फल्छ । घरवरिपरि करेसा, घरमाथी छत वा घरको वरिपरिको बरण्डामा गमलामापनि यो रोप्न सक्नुहुन्छ । यसको बिरुवा कहाँ पाइन्छ ? कसरी रोप्ने यो सबै बारे हामी अर्को पोष्टमा जानकारी दिनेछौ ।